I-Concept UFO evela kuDell, imbangi eqonde ngqo yeNintendo Shintsha | Izindaba zamagajethi
UDell wethula iConcept UFO, "inguqulo" yayo yeNintendo Shintsha
URafa Rodríguez Ballesteros | | Amakhonsoli, Imicimbi, Izaziso, Imidlalo yevidiyo
Yilokho esikufunayo emicimbini yomhlaba wonke, imishini emisha namadivayisi azokwengeza kukhathalogi etholakala emakethe. Esimweni esinjalo, kusuka kumkhiqizi owaziwayo wamakhompiyutha wezinto uDell sikwazile ukufunda ngomqondo wedivayisi esiwazi kakhulu, i-Concept UFO.
Yize i-priori kuphela yisiboneloKonke kukhombisa ukuthi kusesigabeni sokuthuthuka. Futhi kungenzeka kakhulu ukuthi kuyo yonke i-2.020 izofinyelela kuzo zonke izitolo. Ikhonsoli enesibonisi Nintendo okuthathe imibuthano ehlukahlukene "yabadlali bamageyimu" yi kusondele kakhulu ekubeni nembangi ngqo emakethe.
I-Concept UFO, imbangi eqondile ye-switch
Njengoba sibona ezithombeni, i-Concept UFO ingabizwa Nintendo Shintsha kaDell. Ifomethi yayo ilandelwa, nomphakathi lapho kuhloswe khona, kuyafana. Sekuvele imininingwane emincane ngalokho uDell azimisele ukunikela ngakho kulo mkhakha. Umbuzo uthi ngabe uzokwazi ukumelana nomhlaba onamandla onke weqiniso.
Okwamanje siyazi ukuthi ikhonsoli izoba ne- Isikrini esingu-8-intshi esinokulungiswa okungu-1200p. Futhi i- Izilawuli eziseceleniokuyikhona futhi esikhiphekayo, sebenza ngokuhlukile njengezilawuli eziyisisekelo, noma ndawonye ekulawuleni okuphelele. Ngokuqondene ne-chip engingayifaka, sazi kuphela ukuthi kuzoba yifayela le- I-XNUMXth Gen Intel.
Kungenzeka yini ukuthi ube wonke amandla we-Alienware pc kudivayisi encane ephathekayo? Uma le phrojekthi yesiteleka yenziwa futhi i-Concept UFO iba yinto engokoqobo, sizokwazi ukuthembela ku- Encane Windows 10, kodwa unamandla okuba Iyakwazi ukuqhuba imidlalo edinga kakhulu.
Uma sibheka ukuxhumeka futhi kunikeza ngamathuba amaningi. Njengoba kulindelwe, i-Concept UFO izovela Ukuxhuma kwe-Bluetooth, iWifi noma ngabe nge Imbobo yeThunderbolt. Kuzoba futhi Amachweba we-USB lapho singaxhuma khona amagundane noma amakhibhodi ukuwasebenzisa njenge-PC ejwayelekile. Ngabe sibhekene ne- ikhompyutha mini yabadlali bamageyimu? INintendo Ukushintshwa kukavithamini? Uyabona ukuthi lolu hlobo lwedivayisi lungahle lube negebe emakethe?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » UDell wethula iConcept UFO, "inguqulo" yayo yeNintendo Shintsha
Ungasihlanza kanjani futhi ugcine isikhala ku-Android yakho
Ongakubuka ku-Netflix naku-HBO ngoJanuwari 2020